we may – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 91 Results 5 Domains
"kungenzeka sabelane ngokuhlanganisiwe, ulwazi olungabonakali lomuntu siqu esidlangalaleni"
28 Hits www.google.cn
Kungenzeka siguqule imibandela noma imiphi eminye imibandela eyengeziwe esebenza Ohlelweni mhlampe njengokukhombisa umthetho noma ushintsho ohlelweni lwethu. Kufanele ujwayele ukubheka imibandela. Siyoposa izaziso zokuguqulwa kwalemibandela kuleli khasi. Sizoposa isaziso semibandele eyengeziwe eguquliwe Ohlelweni olufanele. Izinguquko ngeke kusebenze uma sekwedlulile kanti kuyosebenza ngokushesha kunezinsuku ezilishumi nane emva kokuba ziposiwe. Kodwa-ke izinguquko eziqondene nezinto ezintsha Zohlelo noma izinguquko ezenzelwe izizathu zomthetho ziyosebenza ngokushesha. Uma ungavumelani nemibandela yohlelo eguquliwe, kufanele umise ukusebenzisa kwakho Uhlelo.